यी ३ राशिहरु माथि भागुवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा ! कमेन्टमा “ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस ! – Hamrosandesh.com
यी ३ राशिहरु माथि भागुवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा ! कमेन्टमा “ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस !
भागुवान शिवको आशिर्वाद र कृपा सबै रशिहरुमा हुने गर्दछ ! तर जसलाई भगवान शिव आफ्नो विशेष कृपा राख्दछन कर्कट राशि : वृष राशि पछि कर्कट राशि माथि भगवान शिव निकै खुशी हुन्छन र आफ्नो कृपा पनि बर्साउछन । यस राशिको मानिस शिवको भक्तिमा सधै तलिन रहन्छन । यस राशिको मानिस भगवान शंखरको कुनै पनि व्रत वा चाडपर्वमा व्रत राख्न छोड्दैनन । भगवान शिवको सधै यो राशि माथि कृपा रहने गर्छ ।